चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उत्तराखण्डमा घुसेर भारतीय पुल भत्काए! - Dainik Online Dainik Online
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उत्तराखण्डमा घुसेर भारतीय पुल भत्काए!
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७८, बुधबार १ : ३२
एक सयभन्दा बढी चिनियाँ जनमुक्ति सेना भारतीय भूमि उत्तराखण्डमा बिना अनुमति घुसेको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। चिनियाँ सेनाले हालै उत्तराखण्डको सीमा पार गरेर बराहोटीको एउटा पुल भत्काइदिएको समाचारमा जनाइएको छ।
लद्दाखका विवादित क्षेत्रबाट भारतीय र चिनियाँ सेना फर्किने सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बेला चिनियाँ सेनाले उत्तराखण्डमा भारतीय पूर्वाधार भत्काएको खबर आएको हो।
सन् १९५४ मा पहिलोपटक चिनियाँ सेनाले उत्तराखण्डको सीमामा अवरोध सिर्जना गरेको बताइएको छ। त्यसपछि त्यही कारणले त्यहाँ सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो। इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार सयजना चिनियाँ सेना ५५ वटा घोडासहित उत्तराखण्ड प्रवेश गरेका थिए।
उनीहरु तुन जुन ला पास पार गरेर पाँच किलोमिटर परसम्म पुगेको बताइएको छ। यो विषयमा भारतीय पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। गतवर्षको जुन १५ मा लद्दाखको सीमा नजिकै हिंस्रक झडप हुँदा २० भारतीय सेना र ५ चिनियाँ सेनाको ज्यान गएको थियो।
त्यसयता दुवै देशबीच सैन्यस्तरमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास जारी छ। यो समाचार आएसँगै भारतका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीमाथि निशाना साँधेका छन्।
काँग्रेसका वरिष्ठ नेता गान्धीले मोदीले दुश्मनले आक्रमण गरे उनीहरुको घरमै गएर आक्रमण गर्ने बताउने गरेता पनि वास्तविकतामा चीनले भारतमै घुसेर भारतीयमाथि आक्रमण गरेको बताए।
उनले यति हुँदा पनि मोदी चुप बस्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्।